TSIMOKARETINA VIH-SIDA : Niampy 187 indray ny tranga vaovao eto Mahajanga
Tamin’ireo tonga nanao fitiliana ny fiandohan’ny volana janoary tamin’ity taona ity ka hatramin’ny faran’ny volana oktobra lasa teo no nahazoana ny antontan’isa fa niampy 187 ny tranga vaovao amin’io olona mitondra tsimok’aretina Vih Sida, tamin’ireo olona miisa 18 239 tonga nanao fitiliana teto Mahajanga. 3 décembre 2019
Izany hoe, tsy tena mbola voafaritra ny isa ankapobean’ireo olona voan’ny Sida eto an-toerana, satria dia tsy mavitrika ny rehetra hanao io fitiliana maimaim-poana io, hoy ny tompon’andraikitra. Raha izany ihany no hany ahafantarana ny toe-pahasalaman’ny tsirairay na mitondra na tsy mitondra ity tsimokaretina iray ity. Azo atao tsara anefa ny mitelina fanafody maimaim-poana zaraina ho an’ireo olona fantatra fa mitondra io tsimokaretina io, mba hahafahany manalava ny androm-piainany sy hiarovana mba tsy hamindra amin’ny hafa. Raha tahiany ka tsy misy io tsimokaretina io ny olona iray dia vao mainka hanamafy ny fomba fiarovana ny fitondran-tenany tsy ho voaloto, hoy ny mpitsabo, ka tsy tokony hampatahotra ny fitiliana.
Nankalaza ny 01 desambra, izay andro iraisam-pirenena hiadiana amin’ny tsimokaretina Vih-Sida ny teto Mahajanga nanomboka ny alahady lasa teo, ka ny fitiliana sy fanentanana no natao tamin’io andro voalohany io. Fa ny tena nampiavaka ny fankalazana tamin’ity indray mitoraka ity dia ny nananaovana ny tolotra maimaimpoana mandritra ny iray volana be izao, fa tsy natao ho andro iray tsy toy ny teo aloha. Izany hoe hatramin’ny faran’ity volana desambra ity dia hisy hatrany ny fitiliana maimaim-poana sy fanafody maimaim-poana hozaraina ho an’ireo mitondra ny tsimokaretina.
Ny fiaraha- mientana eo amin’ny Minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka sampana Mahajanga sy ny mpiara-miombon’antoka dia ny Ajpp no midina ifotony eny aminy Csb II any anivon’ireo fokontany isany avy manao io fanentanana sy fitiliana ny Sida io. Koa niantso ny olona rehetra, ankoatra ireo vehivavy bevohoka izay efa anaovana ny fitiliana mandritra ny andro fisafoany, ny lehiben’ny inspekteran’ny fahasalamana ato anaty ny distrikan’i Mahajanga voalohany, mba ho tonga hizaha ny toem-pahasalamany mandritra ity iray volana ity, izay antoka hiadiana aminy Vih-Sida eto Mahajanga. Natao tsiambara-telo avokoa ny valin’ny fitiliana ary misy ny lalàna velona hanenjehana ireo mpitsabo izay minia manaparitaka io valin’ny fitiliana io any anivon’ny fiarahamonina.